अब दल दर्ता गर्न संघीय संरचना अनिवार्य ! – Himalitimes
अब दल दर्ता गर्न संघीय संरचना अनिवार्य !
२०७७ आश्विन १५ ०५:२८ मा प्रकाशित
यसरी विवरण बुझाउँदा भने प्रदेश समितिका पदाधिकारीको विवरण प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला र स्थानीय तहको समितिका पदाधिकारीको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
कहिलेसम्म आइपुग्ला नेपालमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन ?
पाकिस्तानमा सबै विद्यालयहरु खुले